Pangu inotangisa vhezheni 1.0.1 yechishandiso chayo | IPhone nhau
Pangu inovhura vhezheni 1.0.1 yechishandiso chayo nemabug fixes
Inenge awa imwe yapfuura, timu yekuChinese yekubira inoona nezve yazvino jailbreak ine yakaburitswa vhezheni 1.0.1 yePangu Jailbreak. Iyo yekuvandudza, iyo inoramba ichiwanikwa Windows chete, iri yekuvandudza inosanganisira kururamisa zvikanganiso panguva yekuisa iyo jailbreak. Kana wanga uchinetsekana kana usati wakwanisa kuita jailbreak neshanduro 1.0.0, ikozvino unogona kuyedza nekuburitswa uku.
Mushure mekuverenga rondedzero yezvigadziriso, ini ndasangana neinenge hafu yematambudziko ataurwa. Iyo yekubudirira mwero, mune yangu kesi, yanga iri «birria», sezvo ini ndichifanirwa kuzviita kakawanda kuti ndiiwane pane yangu iPad (kwete zvakadaro pane iyo iPhone). Nyaya yeiyo Pangu app kubviswa Izvo zvakandibatawo uye ndakabvisa zvese WWDC application (ndinofunga chimwe chinhu kubva kubhegi kunoitwa nemaitiro) uye Pangu app. Ndinovimba kuti avo pakati penyu vanoita jailbreak kubva zvino havazove nematambudziko.
Chii chitsva mushanduro 1.0.1 yePangu Jailbreak yeIOS 9
Gadzirisa bhagi iyo yakatungamira kune kukanganisa kodhi.
Gadzirisa kuparara kana uchivhura pane mamwe maPC.
Kuvandudza chiyero chebudiriro.
Ita shuwa kuti iyo Pangu app yabviswa.
Isu tinokuyeuchidza iwe kuti kana usati wapaza jailbroken yako iPhone, iPod kana iPad zvakadaro uye iwe uri kuzvifunga, iwe unogona kutevedzera yedu Dzidziso kune jailbreak iOS 9.0-9-0.2. Iwe unogona zvakare kushanyira chinyorwa che Tweaks inoenderana neIOS 9 yakagadziridzwa masikati ano. Unogona kudhawunirodha Pangu Jailbreak 9 v1.0.1 kubva en.pangu.io. Avo vedu vakatovharirwa uye maererano nenhau dzakabatanidzwa mune rondedzero yeshanduko, ini ndinofunga hatifanirwe kuita chero chinhu, kana kumirira kugadziridzwa muCydia, nekuti shanduko idzi ndedzenguva yekuiswa kwejeri.
Usazeze kusiya mune zvakataurwa kana iyi vhezheni yatogadzirisa matambudziko ako ese. Zvisinei, zvinoita sekunge Pangu jailbreak inoshanda zvakanyanya zvirinani kupfuura yapfuura TaiG jeri, maricho ezvinhu zvachinja mumwedzi mishoma apo patakaona vekare vachiba kodhi kubva kune yekupedzisira kuti vatange yavo yekuparara. Chero nzira, inhau dzakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Pangu inovhura vhezheni 1.0.1 yechishandiso chayo nemabug fixes
Icho chinongedzo chePangu vhezheni 1.0.1 inoenderana ne1.0.0
Iwe unofanirwa kuenda kuChina shanduro yeiyo peji ye1.0.1
Ndeipi avhareji inotora mac?
Mhoro Wilfredo. Hatigone kuziva izvozvo, asi kana tikatarisa zvakaitika muIOS 8 jailbreak, Pangu anozvitangisa munguva shoma. Ini ndinogona kutsika zvigunwe zvangu, asi ini ndingati hazvingatore vhiki. Zvisinei, kana ichikushandira, inogona kuiswa nemuchina chaiwo. Semuenzaniso, heino dzidziso https://www.actualidadiphone.com/como-hacer-jailbreak-con-taig-desde-mac-con-una-maquina-virtual-con-windows/
Ini handizive kuti chii poindi yekuisa iyo JB pane iOS senge 9 uye 9.0.2
Zvakanaka, zvakafanana neese maIOS apfuura neaya anouya …… ​​..kuvhara mabasa iwe ausina pamutemo ._.
Izvo chaizvo izvo, semuenzaniso swipeselection, apuro haisati yamboita chimwe chinhu chakadai uye ichokwadi chiri chinzvimbo chinoshandurwa.
Ivo vasingakwanise kurodha vhezheni 1.0.1 chinja yavo browser, iyo nyowani vhezheni haioneke kubva firefox, kubva chrome zvese zvakanaka.
Pindura kune sinanexos
NDINOGONA IZVI !!!
"Sub-process / usr / libexec / cydia / cydo yakadzosa kodhi yekukanganisa"
Kana isu takaita iyo jb neshanduro 1.0, zvinokurudzirwa kuti uzviite zvakare ne 1.0.1?
Kana iwe uchitova neiyo JB yaitwa, nei uchida kuzviita zvakare? Izvo hazvichinje chero chinhu, zvinongogadzirisa zvikanganiso kana uchigadzira iyo JB.
Zvakanaka, neiyi, Cydia haishande kwandiri kana, inondipa skrini uye inobuda
Uri kuita iyo JB nechishandiso chakangodzoreredzwa uye pasina kudzorera backup? Ndiyo chete nzira yekuti ifambe zvakanaka. Paunenge uchinge uine Cydia kuisa uye kushanda mushe, iwe unodzoreredza backup yako.
zvakanaka, ndichaedza kuzviita seizvi
zvakanaka, zvagadziriswa, ndaifanira kuzviita sezvakataurwa naLuis V
Nekuti iko kungo dzoreredzwa hakuise mune chero danho redzidziso? Ndiri kuzviita ne iphone sezvandaive nazvo
alex castañeda akadaro
Vakamusveta 73mb muma 2 hrs uye ini ndine 10 megabytes internet pamba iyo yakaipa kwazvo kune chimwe chinhu icho kune dzimwe nzvimbo chine uremu hwakaenzana kurodha pasi, usabise izvi, zvinondiita ndapererwa
Pindura kuna alex castañeda
Hazvindibvumidze kuti ndigadzirise pese pandinenge ndichida kumutsiridza ini ndinotora iyo ichangoburwa 1.0.1 uye ini ndinoivhura uye ini ndinowana gadziriso ini ndinogadziridza uye ndinoramba ndichiwana iwo iwo iwo meseji mumwe munhu anoziva kuzviita
Rarama GIF: chinja yako Live Mapikicha kune animated GIF
Tweaks inoenderana neIOS 9 (II)